प्रतीक ढकाल काठमाडौं, ३ जेठ
३ जुन १९५० का दिन अन्नपूर्ण प्रथम (८,०९१ मिटर) हिमालको शिखरमाथि सफल आरोहण गरी फर्केका मानव इतिहासकै प्रथम ८ हजार मिटरमाथिका आरोही मोरिस हेर्जोगलाई फ्रान्सका तत्कालीन राष्ट्रपति चाल्र्स द गोलले सार्वजनिक रूपमै बधाई दिँदै भनेका थिए रे- ‘त्यति अग्ला र खतरनाक हिमालमा पनि चढ्न सकिन्छ भनेर तपाईंले सारा संसारलाई प्रमाणित गरेर देखाइदिनुभयो । सारा विश्वलाई नै फ्रान्सेलीहरूको आँट र साहस कस्तो हुन्छ भनेर छर्लङ्ग पारेर देखाइदिनुभयो । हाम्रो देशको इज्जत बढाइदिनुभयो । अब तपाईंले जीवनभर आप्mनो त्यो साहसको कथा सारा फ्रान्सवासीहरूलाई बताइदिनुहोस् ताकि हाम्रा युवाहरू पनि तपाईं जस्तै समर्पित, साहसी र वीर राष्ट्रप्रेमी बन्न सकून् ।’
यही कीर्तिमानलाई कदर गर्दै उनलाई ८ वर्षसम्म फ्रान्सको युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनाइयो । १७ वर्षसम्म त सांसद नै रहे उनी । त्यही बेला उनले लेखेको फ्रेञ्च भाषाको किताब ‘लान्नापूर्ना फर्मिय उई मिल’ ५० लाख प्रतिभन्दा बढी बिक्री भयो । सन् १९५१/५२ मा त बाइबलभन्दा बढी बिक्यो रे यो किताब ।
मोरिस हेर्जोग आफैँ भन्छन्, ‘मेरो यो किताब ६० भाषामा अनुवाद भएको छ । फ्रान्सका १६-१७ वर्षका युवाका लागि पाठ्यक्रममा राखिएको छ । यी सबै कुराबाट के देखिन्छ भने हिमालमा के भइरहेको छ भन्ने कुरामा सारा संसारले नै चासो राखेको हँुदो रहेछ ।’
यही जगमा उठेको फ्रान्सको पर्यटन अहिले विश्वमै नम्बर १ मा छ । सन् २०१८ मा मात्र ८ करोड ९० लाख पर्यटकले फ्रान्सको भ्रमण गरेका छन् ।
तर, हाम्रो विडम्बना, जुन देशले संसारका ८ हजार मिटरभन्दा बढी उचाइ भएका कुल १४ वटा हिमालहरूमध्ये ८ वटा र २० वटा चुलीहरूमध्ये १४ वटा चुली आफ्नै भूगोलभित्र समेटेको छ, त्यसका लागि भने यो बृहत् हिमशृंखलाको ‘श्रीखण्ड’ आजसम्मै पनि ‘खुर्पाको बिँड’कै हैसियतमा रहेको देख्न पाइन्छ ।
संसारकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको प्रथम आरोही भएर पनि हाम्रा तेञ्जिङले केही पाएनन् र विस्तारै भारतले आफ्नो बनायो । ‘आपा’ शेर्पाले पनि न त ‘दाता’ सरकारबाट केही पाए, न ‘दबाबदाता’ मिडियाबाटै आफ्नो शुद्ध नाम उल्लेख भएको देख्न पाए । उनको पनि मन अड्याउने ठाउँ कतै बाँकी रहेन । र, विस्तारै अमेरिकाले आफ्नो बनाउँदै छ ।
यस्ता धेरै वीर आरोहीहरूको धमाधम नागरिकता फेरिँदै छ । धमाधम वासस्थान फेरिँदै छ । सुरुदेखि नै नफेरिएको कुरो एउटै छ- आरोहीप्रति दर्शाइने सरकारी उदासीनता, निष्क्रियता र अपमान अनि हिमाललाई कुनै महत्त्व नै नदिने सरकारी रवैया र यस विषयमा पूरै मौन नागरिक समाज ।
नेपालमा आरोहीलाई कुनै सम्मान छैन । मुलुक कहिले सगरमाथा आरोहणको हीरक महोत्सव मनाउँछ त कहिले ल्होत्सेको । कहिले अन्नपूर्णकै उत्सव हुन्छ त कहिले कञ्चनजङ्घाको । मुलुकका ठूलाबडाहरू हेलिकोप्टर चढेर समारोहको उद्घाटन गर्न दगुर्छन्, मानौँ कि उनीहरूकै निगाहले गर्दा त्यो हिमाल त्यहाँ ठडिएको होस् ।
यस्तो अवसरमा पनि ती कीर्तिमानी ‘आपा’ त्यहाँ हुँदैनन् । कीर्तिमानी कामीरीता हुँदैनन् । तेञ्जिङका सन्तान छैनन् । फू दोर्जीलाई कसैले सम्झिँदैन । बाबुछिरीलाई सबैले बिर्सिसके । डा. हर्क गुरुङ, पेम्बा, ल्हाक्पा गेलु, आङरिता, ङवाङ निमा, लाक्पा थार्के, छेवाङ ङिमा, दा गोम्बु, पर्वतीय साहित्यका लेखक, उपासक, समीक्षक, छायाकार कोही पनि हुँदैनन् त्यहाँ । तिनका सन्तान पनि कोही हुँदैनन् त्यस्ता समारोहमा । मात्र एउटा कर्मकाण्डी र नियमित प्रक्रिया पूरा गरेझैँ बडो लज्जाजनक तवरले आफू आफैँले ‘आसन-ग्रहण’ गरेर हिमालको श्राद्ध गरिरहेको देखिन्छ, हाम्रो पर्यटन मन्त्रालय ।
कुनै पनि हिमालको आधार शिविरसमेत नदेखेका ‘ठूलाबडा’हरू ‘पर्यटन’का हर्ताकर्ता बनेका हुन्छन् । हिमालमा गर्नुपर्ने कुरो के हो- कहिल्यै पनि योजना आयोगको चासोको विषय बन्दैन/बनेको छैन । अर्थ मन्त्रालयलाई रोयल्टीको ठूलो पोको मात्रै चाहिन्छ, अरू कुनै भावनात्मक कुरासँग उसको सम्बन्ध रहेको देखिँदैन ।
के सरकारले कहिल्यै ती ‘आइसफल डाक्टर’हरूका बारेमा सोच्नुपर्दैन, जो प्रत्येक सिजनमा दैनिक ४ सय ५० रुपैयाँ ज्याला लिएर सगरमाथा चढ्नेहरूका लागि भर्‍याङ हालेर बाटो बनाइरहन्छन् ? उनीहरूको जिन्दगी विदेशी आरोहीले राजीखुसीले दिएको ‘टिप्स’बाट चलिरहेको छ । के यही हो आफूलाई चौबीसै घण्टा जोखिममा राख्दै शिखरमा जाने बाटो बनाइदिने ‘दधिचि’हरूलाई राज्यका तर्फबाट गरिने सम्मान ?
आफू मातहतका अड्डाहरूलाई भर्तीकेन्द्र बनाउन सक्ने ‘शक्तिशाली’हरूले किन गर्न सक्दैनन् यिनीहरूको उद्धार ? पर्यटन बोर्डमा आफ्नो खल्तीको सीईओ नियुक्ति गर्नका लागि लोकलाज भन्ने कुरालाई पूरै लत्याएर सबै कानुन मिच्न उद्यत शक्तिशाली र युवा पर्यटनमन्त्रीका आँखा किन पर्दैनन् यस्ता विषयमा ? के उनीहरूलाई त्यही कामका लागि स्थायी गरेर पेन्सन पाउने गराउन सकिँदैन ? के असम्भव छ यो ?
पर्यटन मन्त्रालय अहिले पनि पर्यटन बोर्डको सीईओ पदको मोलमोलाइ गर्न मिल्नेजति नीति, नियम, कानुन र मर्यादा मिचेर बसिरहेको छ । मुलुकले भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा हेरेको मान्छे पुनः सांसद नै हुन नसक्ने गरी पतनको खाडलमा खसिरहेको छ । के यो मन्त्रालयको काम यत्ति नै हो ?
पाठकलाई यो तथ्याङ्क देख्दा पनि अचम्म लाग्न सक्छ कि सन् २०१६ को डिसेम्बरसम्ममा सगरमाथाको शिखरमा पुगेका आरोहीहरूको संख्या नै ४ हजार ८ सय ७९ पुगेको यस घडीमा संसारकै छैटौँ अग्लो हिमाल चोयु (८२०१ मिटर)को चुचुरो चुम्न नेपालतिरबाट गएका आरोहीहरूको संख्या केवल १४ रहेको छ । नेपालका लागि यस हिमालका कुल आरोही भनेकै पोल्याण्डका ४ जना, रसियन ५ जना, जापानी २ जना, कजाकिस्तानका २ जना र १ मात्र नेपाली आङ फुरी शेर्पा गरी जम्मा नै १४ जना हुन् ।
सन् १९९४ पछि हालसम्ममा जम्मा २ जना ‘कजाख’ले मात्र नेपालतर्फको कठिन बाटो रोजेका छन् । किन ? यसका लागि हाम्रा नीति निर्माताहरूले ‘चोयु’ र ‘मकालु’ हिमालको आधार शिविरको भौगोलिक अवस्थितिलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जो कहिल्यै पनि उहाँहरूको सरोकारको विषय बन्नै सकेन ।
चुचुराहरू नेपालतर्फ परे पनि चोयु, मकालु, ल्होत्से र सगरमाथा चीन र नेपालका सिमानामा अवस्थित साझा हिमालहरू हुन् । यिनमा आरोहण गर्न दुवै देशले अनुमति दिने गर्छन् । चीनबाट अनुमति लिएर मकालु चढ्न आउने टोलीहरूले २ किलोमिटरजति नेपाली भूभागमा हिँडेर मात्र आरोहणको मार्ग भेट्टाउन सक्छन् । त्यहाँ हाम्रो कुनै सुरक्षा चौकी नहुनाले उनीहरू निर्बाध रूपमा नेपालभित्र पस्छन् र शिखरतर्फको बाटो लाग्छन् । त्यस्तै, नेपालबाट अनुमति लिएर चोयु चढ्न जाँदा पनि ५ सय मिटरजति चिनियाँ भूभागमा छिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, चीनले त्यही नाकामै सुरक्षा चौकी राखिदिएको हुनाले उता छिर्नै पाइँदैन । नेपालतिर कोप्रो परेको हुनाले हाम्रोतिरबाट मात्र चोयु चढ्नै सकिँदैन ।
२०६३ सालमा बेइजिङमा भएको युनियन अफ एसियन अल्पाइन एसोसिएसन (यूएएए)को बैठकमा यो पंक्तिकारले अनौपचारिक रूपमै भए पनि पारस्परिक हित र सहयोगका लागि यो कुरो उठाउँदा चिनियाँ पदाधिकारीहरू गम्भीर बन्दै पहिलो पटक यस्तो कुरो सुनेको र नेपालको सरकारी स्तर अर्थात् परराष्ट्र मन्त्रालयबाट कूटनीतिक रूपमा यो कुरो उठाइए तुरुन्तै सोच्न सकिने बताएका थिए । तर, यति महत्त्वपूर्ण भएर पनि यो कुरो कहिल्यै नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा परेन । चीनलाई पनि आफैं तातिनु जरुरी भएन किनकि नेपालतिरको बाटो बन्द हुनु भनेको चोयु आफ्नो एकलौटी हुनु हो ।
हरेक वर्ष घटीमा ७०-८० वटा आरोहण दलबाट प्राप्त हुने रोयल्टी एकलौटी चीनको झोलीमा मात्रै पर्नु हो । अनि किन गर्नुपर्छ र चीनले पहल ? आश्चर्य लाग्छ, यस्तो कुरामा पनि किन हाम्रो ध्यान पुग्दैन ?
प्रकृतिले नेपाललाई हिमालको विशाल शृंखला नै दिएको छ । उच्चताकै हिसाबले हेर्ने हो भने पनि विश्वको सर्वोच्च अर्थात् पहिलो, तेस्रो, चौथो, पाँचाँै, छैटौँ, सातौँ, आठौँ र दशौँ चुचुराहरू नेपालमै पर्छन् । चुलीका हिसाबले हेर्ने हो भने कञ्चनजङ्घा क्षेत्रका अन्य ४ र ल्होत्सेका अन्य २ समेत गरी ८ हजार मिटरमाथिका १४ वटा चुली नेपालमै पर्छन् ।
७ हजार मिटरमाथिका १ सय २२ वटा चुली नेपालमै छन् । ६ हजार मिटरमाथिका हिमालको संख्या नेपालमा झण्डै १ हजार ४ सयको हाराहारीमा छ । ६ हजार मिटरभन्दा मुनिको उचाइलाई त नेपालमा ‘डाँडो’ मात्र मानिने गरिन्छ, जबकि यसभन्दा झनै थोरै उचाइ भएका इल्बु्रस, मेकान्ले, एकान्कागुवा, मो ब्लाँ, फुजी, रकी माउण्टेन आदि हिमालहरूलाई ती देशहरूले संसारभर नै प्रसिद्ध बनाएका छन् ।
आफ्ना हिमालका यी नामहरूमा त्यहाँका मानिसहरू गौरव गर्छन् । जापानमा त उनीहरूको त्यो हिमाललाई ‘फुजी’ मात्र भन्न पनि पाइँदैन, अत्यन्त आदरपूर्वक ‘फुजीसान्’ (फुजीज्यू) नै भन्नुपर्छ ।
यस्तो अद्वितीय सम्पदा नेपालमा छ । आफ्ना आरोहीहरूले यिनै नेपाली हिमालहरूको गुणगान गर्दै लेखेका पुस्तकहरूले पश्चिमाहरूको वाङ्मय भरिएको छ । तर, हामी भने न हिमालको महत्त्व बुझ्छौँ, न लेख्छौँ, न हेर्छांै, न देख्छौँ । न आरोहीको सम्मान गर्छौं, न पर्वतकै । न यस विषयमा हाम्रो कुनै चिन्तन छ, न कार्यक्रम छ, न त चासो वा न त्यसतर्फको भ्रमण नै ।
माधव घिमिरेजी मुख्यसचिव भएका कारणले दुनियाँलाई देखाउनकै लागि भए पनि कालापत्थरमा एक पटक मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्यो । माल्दिभ्सले समुद्रमुनि सरकारको बैठक राखेर जलवायु परिवर्तनप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण गरेकाले ‘ए, हामीसँग पनि त सगरमाथा छ नि साँच्ची’ भन्ने सम्झेर मात्र हो । त्यो पनि घिमिरेजी भएर मात्र हो, नत्र अरू कुनै महापुरुषले त त्यति दुःख पनि गर्ने नै थिएनन् ।
हाम्रो आफ्नो भन्नु नै यही भौगोलिक विशिष्टता, यिनै अग्ला हिमशृंखला र अपार सांस्कृतिक सम्पदा नै हुन् । ‘संस्कृति’ र ‘प्रकृति’ नेपाललाई माथि उठाउने २ पखेटाहरू हुन् तर किन चिन्न सक्दैनौँ हामी ? किन यति अबुझ हुँदै छौँ हामी ? यति ठूलाठूला हिमालका काखमा बसेका र त्यसैको पानी पिएका हामी आज किन यति ‘साना’ मनका भइरहेका छौँ ? हामीमा अब त जागरण आउनुपर्ने होइन र ? कि कालिदासले ‘हिमालयो नाम नगाधिराजः’ भनिदिएकै भरमा हाम्रो सबै काम सिद्धिएको भन्ठान्यौँ हँ हामीले ?
त्यसो होइन । हामीले आप्mनो अमूल्य सम्पत्तिलाई चिन्नै पर्छ । हिमालले हामीलाई ठूलो इज्जत दियो, पहिचान दियो, अब हामीले पनि हिमाललाई महत्त्व दिनै पर्छ । नेपालको पहिचान भन्नु नै बुद्ध, हिमाल, हिन्दुत्व, गोर्खा, शेर्पा र कसैसँग पनि नमिल्ने आकार प्रकारको राष्ट्रिय झण्डा नै हुन् । यी ६ वटा कुरालाई बिर्सिएर नेपालको पहिचान स्थापित हुन सक्ने अवस्था नै छैन । त्यसैले विदेश पढ्न जाने छोराछोरी सबैलाई हिमालबारे केही जान्ने बनाएर मात्र पठाऔँ । तेस्रो मुलुकमा काम गर्न जाने प्रत्येक कामदारले झोलामा हिमालसम्बन्धी २-४ वटा किताब बोकौँ । फुर्सदमा यिनै किताब पढेर मुलुक र माटोको न्यास्रो मेटाऔँ र पढिसकेपछि अरूलाई पनि यही कुरा सुनाऔँ ।
आशा गरौँ, कुनै दिन आफ्नो मन्त्रालयको काम के रहेछ भनेर त्यसको गरिमासमेत बुझ्ने मान्छे शिक्षा र पर्यटन मन्त्रालयमा मन्त्री भएर आऊलान् । ब्रिफकेस बोकेर लिगलिगे दौडमा ननिस्केकै र आप्mनो मन्त्रालयको खास काम के रहेछ भनेर त्यसको अर्थसमेत बुझ्ने मान्छे नै कुनै दिन शिक्षा र पर्यटन मन्त्रालयमा सचिव भएर आऊलान् । देशलाई माया गर्ने मान्छेहरू नै कुनै दिन विश्वविद्यालयहरूका भीसीहरू होलान्, त्यस दिन हाम्रा कलेजका पाठ्यक्रमहरूमा पनि हिमालका विषयमा स्वैरकाल्पनिक र पूर्णतः मनगढन्ते कथाहरूले होइन, साँच्चीकै र यथार्थपरक ‘हिमाल’ विषयले प्रवेश पाउला र त्यसकै पढाइ पनि होला । जन्मेकै ठाउँमा बुद्धको पनि इज्जत रहला, मान होला ।
तर, अहिले हामी यी मन्त्री, भीसी, सचिव जस्ता ठूला मान्छेहरूको पटक्कै भर नपरौँ । हामी सानै मान्छेहरूले नै हिमाललाई माया गर्न सुरु गरौँ । प्रत्येक पुस्तकालयहरूमा हिमालसम्बन्धी किताब राखौँ । प्रत्येक नानीहरूका हातमा यस्ता किताबहरू पुर्‍याऔँ । र, यिनै नानीहरूको निःस्वार्थ चेतनाको जगमा नयाँ नेपालको आशा रोपौँ । लाखौँको संख्यामा रहेका यी नानीहरूको अप्रदूषित मस्तिष्कमा मुलुकको मायाको बीजारोपण गरी समुन्नत नेपालको यात्रा थालौँ ।
हिमालले हामीलाई ठूलो इज्जत दियो, पहिचान दियो, अब हामीले पनि हिमाललाई महत्व दिऔँ । हिमालले हामीलाई विश्वमा चिनायो । अब हामीले पनि हिमाललाई चिनौँ र गौरवान्वित बनौँ । बिना हामी आफैँसँग छ, निर्धो कस्तुरीझैँ सुगन्धको स्रोत खोज्दै यता र उता नदगुरौँ ।
कोरोनाको ग्रहण सधैँ रहँदैन र २० लाख पर्यटक पुर्‍याउन हामी रोइरहनु पनि पर्दैन । हाम्रा राजदूतहरूले नेपालको मार्केटिङ कसरी गरिरहेका होलान् ? एक पटक गहिरो गरी सोचौँ । के यिनीहरूले नेपाललाई चिनेका छन् ? के यिनीहरूले नेपालको हितमै काम गरिरहेका होलान् त ? नेपालको पर्यटन भविष्य र यससँग जोडिएको समृद्धि यही प्रश्नको इमान्दार उत्तरमा आधारित हुनेछ ।
कुरो प्रष्ट छ- सुनको थालीमा सिक्काको भिक्षा मागिरहेका छौँ हामी । यत्तिका हिमाल आफ्नै छातीमा उमार्ने देश कहिल्यै पनि गरिब हुनै सक्दैन ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ ३, २०७७, ०७:३५:००